एसएलसीको कस्तो छ ग्रेडिङ प्रणाली ? कति ल्याउनेले कुन विषय पढ्न पाउने ?
२ असार, ०७३ | 2016-06-15 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । यो वर्षसँगै एसएलसी परीक्षाफल ग्रेडिङ प्रणालीमा प्रकाशित हुने भएपछि विद्यार्थीहरुमा नयाँ जिज्ञासा छ । ग्रेडिङ भनेको कस्तो होला, रिजल्ट कसरी राखिन्छ, कस्तो ग्रेडिङ आउँदा कक्षा ११ मा कुन विषय लिएर पढ्न पाइने हो भन्ने प्रश्न सबैका मनमा छ ।
यसबारे बुधबार मात्रै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदको बोर्ड बैठकले कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्न कति जिपिए चाहिने भन्ने तय गरको छ ।
कति ल्याएमा विज्ञान पढ्न पाइने ?
एसएलसीमा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) २ ल्याएका विद्यार्थीले मात्रै विज्ञान समूहका विषय पढ्न पाउने छन् । विज्ञान समूह रोज्ने विद्यार्थीले एसएलसी परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान र गणितमा सी प्लस ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ ।
विज्ञान समूह अध्ययन गर्न २ जीपीए हुनुपर्छ भने व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकाय अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ३० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेको समग्रमा १.६ जीपीए हुन्छ ।
के हो जिपिए भनेको ?
ग्रेड प्वाइन्ट एभरेजको संक्षिप्त नाम हो जिपिए । अक्षरमा गरिएको विद्यार्थीको मूल्याकंन स्तरीकरणको आनुसांख्यिक मानलाई नै जिपिए भन्ने गरिन्छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत चैतमा लिएको एसएलसी परीक्षाको पुरै नतिजा पहिलो पटक ग्रेडिङ प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने भएपछि यसबारे खाका तयार पारेको हो । परीक्षामा ६ लाख १ सय २० विद्यार्थी सहभागी थिए ।
यसबारे बोल्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले भने, ‘कुन विषय पढ्न कति ग्रेड ल्याउनुपर्ने भन्ने निक्र्योल गरेका छौं, अनिवार्य विषयमा कम्तीमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।’
कक्षा ११ पढ्न ...
११ मा पढ्न एसएलसीमा आठ विषयमध्ये अनिवार्य अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक, गणित, विज्ञानमा कम्तीमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने छ । अनिवार्य जनसंख्या तथा स्वास्थ्य र अरू दुई ऐच्छिक विषयमा भने डी र ई ल्याए पनि ११ मा पढ्न पाइन्छ ।
अंग्रेजी कमजोर भए ...?
अंग्रेजी कमजोर भएका विद्यार्थीले पनि शिक्षातर्फको ऐच्छिक विज्ञानका विषयहरू अध्ययन गर्न सक्नेछन् । सी प्लस भन्नाले ५० देखि ६० प्रतिशत हुन्छ ।
अंग्रेजीमा सी (४० देखि ५० प्रतिशत), सामाजिक र नेपालीमा कम्तीमा डी प्लस (३० देखि ४० प्रतिशत) ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अझै बुझौं ...
कक्षा ११ को प्राविधिकतर्फ अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जिपिए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा सी ग्रेड, सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन समूह अध्ययन गर्न १.६ जिपिए, गणितमा सी, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक र विज्ञानमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भएको विषयमा फरक ग्रेड ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छैन । यो निर्णयले प्रयोगात्मकमा ए प्लस र सैद्धान्तिकमा ई ल्याए पनि विद्यार्थीले भर्ना पाउने छन् ।
यसले सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीले पनि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । दुई विषयसम्म डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सबै विषय अध्ययन गर्न अंग्रेजीमा सी र डी प्लस ल्याएनु पर्ने छ । यसअनुसार ग्रेड सी भन्नाले ४० देखि ५० र डी प्लसमा ३० देखि ४० प्रतिशत हुन्छ ।
व्यवस्थापनसमूह रोज्ने विद्यार्थीले अनिवार्य अंग्रेजीमा डी प्लस ल्याए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनै विद्यार्थीले प्राक्टिकलमा २४ प्राप्त गरेको छ भने प्लस हुन्छ ।
सैद्धान्तिकमा ६ नम्बर मात्रै ल्याउँदा ‘ई’ समूहभित्र पर्छ । सैद्धान्तिक र प्राक्टिकलको दुवै नम्बर जोडदा ३० हुन्छ । ग्रेडमा लैजाँदा डी प्लस हुन्छ । सैद्धान्तिक र प्राक्टिकलमा कति ग्रेड ल्याउने पढ्न पाउने भन्ने व्यवस्था नगर्दा सैद्धान्तिकमा सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीले पनि माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले १.६ भन्दा कम जिपिए ल्याउनेलाई विकल्प नदिएको बताए । ‘फेल ग्रेड नभएकाले विकल्प दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘विज्ञान समूह अध्ययन गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थी फेरि पनि विज्ञान पढ्न वञ्चित हुने भएका छन् ।’
प्राविधिक विषय पढ्न पाउने, कम्तीमा २ जिपिए ल्याउनै पर्ने
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पनि आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना लिन आधार तय गरेको छ । तीनवर्षे डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यतर्फका विषयहरू, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, टुरिज्मलगायत अन्य विषय अध्ययन गर्न पनि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा सी ग्रेड नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
टीएसएलसी कोर्ष न्यूनतम ई ग्रेड र ०.८ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले पनि अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । सीटीईभीटीले सिकाइ क्षमता कम भएका विद्यार्थीलाई एकवर्षे कोर्ष बनाएको छ ।
एसएलसी परीक्षाफल बारे पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्...